Etu ị ga-esi mepụta akwụkwọ ahụaja gị nke animation na Plis. | Gam akporosis
Otu esi emepụta akwụkwọ ahụ aja
Ị chọrọ ike gị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ n'ụzọ dị mfe na ngwa ngwa? Wantchọrọ ime ya site na gallery nke foto gị echekwara na gam akporo na obere nzọụkwụ dị mfe ma na-enweghị echiche ọ bụla nke mmemme ma ọ bụ usoro mgbagwoju anya nke koodu?
Ọ bụrụ otu a, post a ga-abịa kemfe n'ihi na, na nbudata na nbudata nke ngwa n'efu maka gam akporo dị na Storelọ Ahịa Play nke Google, ọ ga-emere anyị ọrụ niile, -emepụta na akwụkwọ ahụ aja mara mma na animated site na foto anyị ga - abụ anyaụfụ nke ndị enyi gị niile. Yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ ịhazi ọwa akwụkwọ ahụaja gị na ụzọ dị iche iche, echefula ọkwa a na vidiyo nke m hapụrụ gị n'elu usoro ndị a ebe m na-akụziri gị iji ntọala niile nke ngwa ahụ m ga-akwado.
Like na-amasị gị video egwuregwu na akwụkwọ ahụ aja? Na njikọ nke anyị hapụrụ ị ga-ahụ ọkacha mmasị gị.
Tupu ịga n'ihu, ka m ghara ichefu, ngwa nke taa anyị ga-eji mepụta akwụkwọ ahụaja anyị nke eserese site na foto nke gam akporo anyị, bụ ngwa n'okpuru aha nke FotoPhase na-enye anyị oké ohere maka mepụta taịl mmekọrịta ahụ na nke eserese dị ka ihe ngosi, nke anyị ga-enwe ike ịhọrọ dị ka ndabere animated wallpaper nke anyị gam akporo.
1 Budata PhotoPhase n'efu na Playlọ Ahịa Google
2 Mana gịnị ka PhotoPhase na-enye anyị?
3 Ihe niile PhotoPhase maka gam akporo na-enye anyị
Budata PhotoPhase n'efu na Playlọ Ahịa Google
Developer: Jorge Ruesga kwuru
Mana gịnị ka PhotoPhase na-enye anyị?
FotoPhase ọ ga-enyere anyị aka ike nke anyi animated screen, ihe a bịara mara kwa Na akwụkwọ ahụ aja, nke anyị ga-enwe ike ịmepụta site na iji dị mfe dị ka ngosi nke foto anabatara na ọba foto nke gam akporo anyị.
Naanị ịhọrọ usoro foto site na gallery nke Androids anyị na ịhọrọ usoro nke usoro dịka ọsọ ma ọ bụ oge a ga-agbanwe ihe oyiyi ahụ, PhotoPhase ga-enwe ike ịmepụta ọsịse akwụkwọ ahụaja mara mma na nke ahaziri iche nke naanị njedebe ga-abụ echiche nke anyị.
Ihe niile PhotoPhase maka gam akporo na-enye anyị
E wezụga inwe ike nke anyị animated na akwụkwọ ahụ aja na a dị mfe ma dị mfe n'ụzọ, ndị a ga-eje ozi na- enwe ike iji ya na ihuenyo mkpọchi nke gam akporo anyị na desktọọpụ ma ọ bụ ihuenyo onye isi ulo akwukwol, Nke a bụ ihe doro anya, ọ bụrụhaala na anyị na-eji ihe nkwụnye gam akporo nke na-enye anyị ohere ịme ihe a ma nwee ike ịgbanwe akwụkwọ ahụaja nke desktọọpụ anyị maka otu n'ime ndị a na-emegharị.
N'etiti nhazi ya ma ọ bụ arụmọrụ ya, enyere anyị ma ọ bụ nye anyị ohere nke ike anyị ahaziri ndụ na akwụkwọ ahụ aja , ekele maka ntọala ntọala a niile.
N'ime nhazi nhazi gị, PhotoPhase gosiri anyị nnukwu akụkụ atọ iji hazie akwụkwọ ndị a na-ahụ anya
General: N'ime ntọala ndị a kachasị mkpa anyị ga-achọta nhọrọ iji mepụta ụzọ mkpirisi nke ngwa na desktọọpụ anyị na nhọrọ ịtọpụta ihe okike anyị dị ka akwụkwọ ahụaja ndabara na gam akporo anyị. Na mgbakwunye na nke a, anyị nwekwara ike ịchọta nhọrọ iji gbaa ọchịchịrị akwụkwọ ahụaja anyị na-agba ume, agba ọchịchịrị dị n'azụ, nhazi ntụgharị ihe oyiyi ka CPU wee nwetakwu n'ime ya, ohere ịgbakwunye n'etiti etiti, mwepụ nke ndabere nke ihuenyo emepụtara, ihe ga - eme mgbe ị na - emetụ akụkụ ọ bụla nke akwụkwọ ahụaja ahụ na - aga n'ihu, ụdị mgbanwe 10 ịhọrọ ma jikọta ya na uche, oge etiti etiti eserese eserese, nsonaazụ onyonyo 34 dị iche iche ma ọ bụ nzacha na ihe ruru ụdị ala iri na abụọ iji rụọ ọrụ maka ihe oyiyi anyị ike image Mozis.
MIDIA: Site na nhọrọ a, ewezuga inwe ike ịhọrọ ihe onyonyo iji jiri okike anyị họrọ n'etiti akwụkwọ ndekọ aha niile na folda nke ọnụahịa gam akporo anyị, ọ na-enye anyị ohere inwe ike ịhọrọ foto ahụ na enweghị usoro ma ọ bụ ọbụlagodi nhọrọ auto-họrọ albums si otu akpaka ụzọ.
AKWOVKWỌ: N'ebe a, anyị ga - achọta nhọrọ abụọ ma ọ bụ atọ dabere na anyị họrọ nhọrọ Nhazi akpaaka, ọ bụkwa oge etiti oge ntụgharị ihuenyo ma ọ bụ nhazi ma ihu na ntanetị.
Ekeresimesi: Site na nhọrọ a anyị ga-enwe ike ịme nhọrọ ahụ ka anyị hụ akwụkwọ ahụaja anyị na-emegharị na TV anyị jikọọ na Chromecast, nhọrọ iji jikọọ na akpaaka, yana ọtụtụ ntọala akọwapụtara maka ndị ọrụ nke ngwaọrụ Google.
Na nkenke PhotoPhase bụ ezigbo ngwa maka onye ọ bụla na-achọ ịhazi akwụkwọ ahụaja ha ntakịrị karịaOh, ịghara ime ka ọ gbanye ya na foto dị mfe, mana iji nwee ike iji ihe ngosi niile nke gam akporo gị mee ka akwụkwọ ahụaja dị egwu ma dị ike nke gosipụtara foto ndị anyị họọrọ site na ntọala ngwa ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Otu esi emepụta akwụkwọ ahụ aja
Samsung fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ nke ahịa ahịa maka Galaxy S8: 60 nde nkeji
A ga-ekwuputa Huawei Watch 2 na February 26 na MWC 2017